Nezvedu - Yuyao Jera Line Fitting Co., Ltd.
YUYAO JERA LINE FITTING CO., LTD ndeye 2012 yakasimbiswa, iri kukura fekitori, iyo inogadzira mhinduro yakazara yezvigadzirwa kune iyo fiber optic tambo kutumirwa neFTTX uye FTTH matekinoroji kunze kwekunze, epasi pevhu mafomu. Jera fekitori ine yakazara zvivakwa zvivakwa kuburitsa fiber optic tambo zvikamu zvekuvaka telecommunication network.
Basa redu ndere kugutsa zvinodiwa nemusika kuburikidza nekuvandudzwa kwetekinoroji muzvikamu zvine chekuita nezvebhizinesi kusvika padanho repamusoro nekushandisa zvigadzirwa uye yavo vanoziva sei.
Chiono chedu ndechekuzadzikisa mukana wekupamhidzira nekugadzira yakaoma uye yakavimbika yakaoma zvigadzirwa zvekuvakwa kweterevhizheni netiweki.
Yedu yakakosha chigadzirwa renji inosanganisira:
● Tambo dzeFibre optic FTTH uye ADSS
● FTTH inodonhedza zvisungo, FTTH inodonhedza waya mabhureki.
● Fibre optic tambo dzakasungwa uye mabhureki eADSS uye Mufananidzo 8 tambo tambo.
● Mabhokisi emagetsi ekugumisa, FTB
● Kuvharwa kweFiber optic splice. FOSC
● Helical waya mukomana anobata ADSS uye Mufananidzo 8 tambo tambo.
● Inoenderana neyakajeka optical network Distribution fiber optic zvigadzirwa, zvinoshandiswa muFTTx network kuvaka.
Jera-fiber fekitori ine hunyanzvi hwe2500 mativi emamirimita, ine gumi nemaviri yeyuniti yemidziyo iri kuwedzera zvachose.
Jera fekitori iri kushanda zvinoenderana ne ISO 9001: 2015, izvi zvinotibvumidza kutengesa kune nyika dzinopfuura makumi mana nenharaunda dzakaita seEurope, CIS, South neNorth America, Middle East, Africa, neAsia.
Hunhu hwezvigadzirwa zveJera zviri kuratidza pamwe nekubatana kwetelecom utility uye yechitatu mapato marabhoritari kuitira kugutsa yemuno misika mirau uye zviyero zvevatengi vedu. Isu tinoongorora zvigadzirwa zvese mu laboratori yefekitori kuti tigutse zvido zvemuno nemitemo yenyika yevatengi vedu.
Isu tinoshuvira kusangana nevatengi vedu zvinodiwa neyakareruka dhizaini yezvigadzirwa, mutengo wakaringana, chivimbo chemhando, inochinja OEM uye nekukurumidza R&D sevhisi.
Zuva rega rega isu tiri kuvandudza chigadzirwa chedu mhando kuti tiwane matambudziko matsva emusika wepasi rose.
Tinogamuchirwa kushandira pamwe, chinangwa chedu chakazvipira kuvaka hwakavimbika, hurefu-bhizinesi hukama nemutengo wakaringana, yakazara sevhisi uye yakavimbika zvigadzirwa mhinduro.